Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQ) | I-Sparky Express®
Imibuzo Ebuzwa Njalo (i-FAQ) - Usizo Lomgwaqo
Umbuzo: Kubiza malini ukukhulisa ibhethri lemoto?
Impendulo: E-Toronto nase-GTA, izinkampani ezidonsayo zikhokhisa noma yikuphi kusuka ku- $ 75 kuya ku- $ 180 ngokunyusa ngakunye. ISparky Express Roadside Assistance ibiza u- $ 60 kuphela.
Umbuzo: Imoto yami ayiqali futhi imi egaraji elibheke odongeni. Unganginikeza umfutho webhethri?
Impendulo: Yebo singakwazi! Sisebenzisa amaphakethe wesimanjemanje futhi singanikeza ngezinsizakalo zokuqinisa ibhethri kunoma iyiphi imoto emile kunoma iyiphi indawo!
Umbuzo: Uchwepheshe wakwaSparky Express uqeda ukukhulisa imoto yami wangitshela ukuthi ngigijime injini imizuzu engama-30, kodwa ngikhohliwe ngacima imoto ngokushesha lapho ehamba. Ngingathola esinye isikhuthazo mahhala?
Impendulo: Ukunyusa ibhetri, okwaziwa nangokuthi ukuqhuma kwemoto, inqubo yokuthatha amandla emthonjeni wangaphandle (njengenye imoto noma into ekhethekile) ukuze uqale imoto enebhethri elifile. Kunezinqubo ezithile okufanele zilandelwe ukuze kugwenywe ukulimala kwemoto noma ukulimala komuntu.
Umbuzo: Ingabe ukukhulisa ibhethri kuyayishaja kabusha?
Impendulo: Cha, akunjalo! Ukukhuthaza ibhethri inqubo esiza kuphela imoto yakho ukuthi iqale uma ibhethri lifile (liyisicaba) noma likhishiwe. I-alternator yemoto yakho izoqala ukushaja ibhethri lakho ngokushesha nje lapho injini yakho isebenza. Ama-techs ethu azokwenza izincomo zokuthi kufanele usebenzise imoto isikhathi esingakanani (phakathi kwemizuzu eyi-10 no-1.5hrs). Ungahle ungasebenzi noma ushayele imoto nxazonke. Kodwa-ke uma ibhetri yemoto yakho "ihambe kabi" ngeke ilayishe kabusha. Ochwepheshe bethu bazokwazisa ngesimo sempilo sebhethri lakho kanye ne-alternator ngenkathi usesizeni.
Umbuzo: Ngifuna bani ukuthi ngithuthukiswe?
Impendulo: Uma utholakala eGreater Toronto Area, insiza yokuqinisa ibhethri enhle kakhulu ihlinzekwa yi-Sparky Express Roadside Assistance. Le nsizakalo yokuqinisa ibhethri iyashesha, inokwethenjelwa, futhi ibiza ama- $ 60 kuphela!